ट्रम्पलाई आफ्नै एजेन्सीमाथि विश्वास छैन ? | ट्रम्पलाई आफ्नै एजेन्सीमाथि विश्वास छैन ? – हिपमत
अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले आफ्नै गुप्तचर एजेन्सीको जानकारीभन्दा ठिक विपरित कोरोनाभाइरस चीनको प्रयोगशालामा बनेको र यसको आफूसँग प्रमाणसमेत भएको दाबी गर्दै आएका छन् ।
यसअघि अमेरिकाको नेशनल इन्टेलिजेन्स डायरेक्टरको अफिसले कोरोनाभाइरस जनावरबाट आएको वा कुनै प्रयोगशालामा बनेको भन्ने बारे आफूहरुले अनुसन्धान गरिरहेको जानकारी दिएको थियो । यद्यपि, उक्त अफिसले भाइरस कुनै व्यक्तिले जानीजानी नबनाएको भन्ने कुरामा आफूहरु पूर्ण रुपमा विश्वस्त भएको पनि बताएको थियो ।
यता चीनले ‘ल्याब थ्योरी’लाई खारेज गर्दै कोभिड–१९ बारे अमेरिकाको धारणाको विरोध गरेको छ । गत वर्षको अन्त्यमा चीनको ऊहान शहरबाट सुरु भएको भाइरसद्वारा हालसम्म ३३ लाख बढी संक्रमित भइसकेका छन् भने २ लाख ३४ हजार बढीको मृत्यु भइसकेको छ ।
यसैबीच चीनको विदेश मन्त्रालयले ट्रम्प प्रशासनले संकट सम्हाल्न नसकिरहेकाले अरु नै कुरामा ध्यान केन्द्रीत गर्ने कोसिस गरिरहेको आरोप लगाएका छन् । मन्त्रालयका एक प्रवक्ताले पनि कोभिड–१९ अमेरिकाबाटै निस्किएको आरोप लगाए । वासिङ्टन पोस्टका अनुसार ट्रम्प प्रशासनले चीनलाई आर्थिक सजाय दिने तरिका खोजिरहेको छ । एजेन्सी